အလင်းသစ် January 15, 2012 at 1:15 AM
ကြုံရ၊ဆုံရ ဘုံဘဝကို ဖတ်သွားပါသည် ညီမငယ်.. :) :)
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! January 15, 2012 at 1:17 AM
ကိုနေဘုန်းလတ်နဲ့ နီးတယ်ဆိုတော့ ..သမီးစံတော့ အလုပ်ရပြီပေါ့.. နောက်ဆက်တွဲလေးတွေလည်း တင်နော် ...:):)
သတိလည်းထားအုံး... လူလဲ ကျပျောက်နေအုံးမယ် ...:D
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) January 15, 2012 at 2:53 AM
ကြုံရတာလေးဖတ်ပြီး ပြုံးမယ်မယ် မကြံသေးဘူး။ ဆုံရတာလေး ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါနဲ့... စကားမစပ် ဟို ...သုံးလပဲခြားတဲ့အမွှာမောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့စုစုပေါင်းနှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမီးပါ။.. ဆိုတာက တကယ်ကို သုံးလခြားမွေးတဲ့ အမွှာ မောင်နှမလား။း(
၁၃ သောကြာအတွက်တော့ အတော်လေးကို ၀မ်းသာကြည်နူးဖြစ်မိပါတယ်။
မံစိလဲ ပျော်ရွှင် ကြည်နူးနိုင်ပါစေ။
blackroze January 15, 2012 at 3:08 AM
ရအောင် မဖော်ထုတ်နိုင်ပါလားနော် ညံပါအေ
camomilla January 15, 2012 at 3:50 AM
မဒမ်ကိုး January 15, 2012 at 7:25 AM
သမန်စီးလေးရယ် ဖတ်ရင်းနဲ့တောင်မူးသွားတယ် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေကလဲ ရှုပ်ထာအေ
သွားလေရာ ၂၄ ပစ္စည်းလေးရွတ် .
san htun January 15, 2012 at 7:43 AM
တခါတလေ သေခြင်းတရားကို မေ့နေတာ ခုလို ကိုယ်ချစ်ခင်ရသူတွေ ခွဲခွာသွားမှ သေခြင်းတရားကို သတိရမိတယ်..
လမင်းငယ် January 15, 2012 at 8:56 AM
ညီမရေ ပိုစ့်လေးနဲ့ သီချင်းအရမ်းလိုက်တယ်ကွယ်
မြတ်ကြည် January 15, 2012 at 11:44 AM
မြတ်ကြည်လည်း အခုတလော ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းမသိပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လည်း နယူးရီးယားမတိုင်ခင်လေးတင် ကားအက်ဆီးဒန့်နဲ့ ဆုံးပါးသွားရှာတယ်။ ပြီးတော့ ဆေးရုံက ဆရာဝန်၊ ဆေးရုံရှေ့မှာပဲ။ ကားတိုက်လို့ ဆုံးပြန်တယ်။
မောင်ဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ခြံ) January 15, 2012 at 2:46 PM
သမန်စီး ပို့စ်ဖတ်ရင်း ပညာရေးမူးကိုလည်းဒေါကန်မိတယ် အောင်လက်မှတ်ပြန်ထုတ်ဖို့ကျမ်းကြိမ်ရပုံကိုမြင်ယောင်ရင်း သြော်လမ်းနောက်ပြန်ပြန်လျှောက်နေသူတို့ကိုသွားသတိရမိတယ် သူငယ်ချင်းဆုံးသွားတာ သနားရတယ် အလုပ်မအားရှာတာကိုလည်းသိလိုက်ရတယ် နောက်ဆုံးသီချင်းတင်ထားတာတွေ့လိုက်ရတယ် ဒါပေမယ့် နားမထောင်တော့ပါဖူး အခုတလော စင်ပေါ်မှာ ပရိတ်သတ်ကိုလေးစားပါတယ်ပြောပြီး သောက်တလွဲလုပ်နေတဲ့ အနုပညာသမားအမည်ခံသူတချို့ကို သောက်မြင်ကပ်လို့အေရယ်.....
Kyaw Hnin Se Lwin January 15, 2012 at 4:08 PM
ကျန်းမာအောင်နေ သွားရေးလာရေးလည်း ဂရုစိုက်နော်
jasmine(တောင်ကြီး) January 15, 2012 at 10:13 PM
မောင်မောင် January 17, 2012 at 2:49 AM
သီချင်းတော. ကြိုက်တယ်ဗျာ။ အစ်မစံကတော. ဖြစ်ရမယ်။
Crystal January 17, 2012 at 7:03 PM
အောင်လက်မှတ်လေး တစ်စောင်ပျောက်တာ တော်တော်အလုပ်ရှုပ်သွားမှာပဲ
ဒီလိုမှန်းသိရင် ဆယ်တန်းပဲ ပြန်ဖြေလိုက်တာ ဟုတ်ဘူးးးးး :P